Kaydka Apple Store Online wuxuu xiraa kahor imaanshaha alaabada cusub | Wararka IPhone
Riwaayaddii ayaa bilaabmaysa. Qoraalka dhammaan fureyaal Waxay umuuqataa inay isku soo noqnoqonayso: xiritaanka Apple Store Online iyo saacado kadib soo bandhigida alaabada cusub. Saacado un kadib markii Tim Cook uu talaabo uqaaday masraxa Tiyaatarka Steve Jobs ee Apple Park, Dukaanka Apple Online wuxuu xirayaa inuu cusbooneysiiyo leh wararkii galabta.
Imaatinka seddex nooc oo cusub oo iPhone ah ayaa la filayaa, dib u habeyn Apple Watch ah iyo hoos u dhigista qiimaha qaar ka mid ah Mac-yada, in kasta oo aysan waxba aheyn waxa ay u muuqato muxaadar meesha had iyo jeer ay kadis noqon karaan. Dukaanka khadka tooska ah ayaa furmi doona ka dib marka uu dhammeeyo soo bandhigida qiyaastii 21 fiidnimo (waqtiga Isbaanishka).
Apple Store Online: "Goor dhow ayaan soo noqon doonaa"
Goor dhow ayaan soo noqon doonnaa. Waxaan waxoogaa isbedel ah ku samaynaynaa Apple Store. Ku rid mar dambe.
Hal ku dhiga hal ku dhiggan Apple waa la xiray Apple Store Online, meesha aan ka iibsan karno wax soo saarka tufaaxa weyn. Sida Keynotes kale, dukaanka waa la xiray saacado kahor dhacdada si loo cusbooneysiiyo dhammaan sharaxaada iyo qiimaha, marka lagu daro ku darida alaabada cusub ee lagu arko munaasabad kasta oo gaar ah. Sidan oo kale, waxay hubiyaan in aanu jirin qof bilaa aqoon ah oo iibsada wax soo saar dhawr saacadood gudahood marka la soo bandhigo isla badeecada la cusboonaysiiyay.
Waxaan xasuusnaa inaad si toos ah ula socon karto munaasabadda boggayaga internetka, iyo sidoo kale ku noolaanshaha bogga rasmiga ah ee tufaaxa weyn. Waxaan kugu wehelin doonaa soo bandhigida iphone-ka cusub, kan cusub ee Apple Watch. Laakiin sidoo kale waxaa jira fursado sare oo lagu arko taariikhda la sii daayo ee dekedda amraya, AirPower, iyo sidoo kale soo saarista AirPods kiiska wireless-ka ah ee lacag la'aanta ah. Waxaan kugu sugeynaa 18.30:XNUMX pm galabnimo halkan, oo ku saabsan iPhone News, oo leh dhammaan wararka ku saabsan dhacdada galabta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kaydka Apple Store Online wuxuu xiraa kahor imaanshaha alaabada cusub
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu yeelan doonaa cabbir ka ballaaran: 40 iyo 44 mm